Ukuphupha ngexhama Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ixhama yenye yezona zilwanyana zidumileyo zehlathi. Xa ziphuma zisiya ehlathini xa kuhlwile, ziyakubonwa ngokulula ezi zilwanyana. Ngokungafaniyo nexhama, ixhama lineempondo ezincinci ezimalunga nee-intshi ezisibhozo ubude, kwaye isilwanyana sonke sincinci kunexhama, into ethetha ukuba izilwanyana zinokubalulwa kakuhle nakubantu nje abangaqhelekanga.
Umfana osemtsha, inkungu, uhlala ehlala kufutshane nomama wakhe. Imvubu evela kwiWalt Disney World yakha yoyisa iscreen esikhulu njengo "Bambi" - ikhathuni yowe-1942 isakhuthaza abancinci nabadala namhlanje.
Ngeentloko zawo ezintle, ezimxinwa kunye nemilenze emide, amaxhama akhangeleka emhle kakhulu. Ingqondo yabo yokujoja ibhengezwe ngakumbi kwaye, enkosi ngamehlo abo ajonge ecaleni, banokubona okungqongileyo ngaphandle kokujika iintloko. Endle banentloni kwaye bayabaleka xa besiva ingozi, kumyezo wezilwanyana nakwindawo zokugcina izilwanyana, kwelinye icala, amaxhama anokuzithemba kakhulu.
Kwintsomi yamaCelt, inyamakazi lalingumzekelo wothixokazi okhuselayo owayekhokela abantu abalahlekelekileyo ngaphandle kwehlathi. Kwi el mundo Kumaxesha anamhlanje sidibanisa ixhama kunye nobumnandi kunye nokulumkisa, imiba ekwanayo ekuchazeni amaphupha.
1 Uphawu lwephupha «ixhama» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ixhama» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ixhama» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ixhama» - ukutolikwa ngokubanzi
Njengophawu lokulala, iinyamakazi zibonisa ukuvisisana, Suerte nangaphakathi paz. Ukumbona ephupheni, ke, kungabonakalisa ubudlelwane obonwabileyo okanye impumelelo yeshishini, kodwa inokuba sisilumkiso sokungayibeki emngciphekweni ithamsanqa lakho kwaye uyigcine ngononophelo, njengoko ineentloni njengexhama.
Ixhama lasekhaya lifanekisela ukudibana kobuhlobo okanye enye Umnqweno wabantwana. Ukuba, ngokuchaseneyo, ixhama okanye inkumba iyabaleka ephupheni, kuya kufuneka ulumke ungoyikisi abahlobo bakho kwaye ubenze babhabhe.
Ixhama elifileyo ephupheni luphawu olunephupha kakhulu. Ukuba iphupha libona inyamakazi okanye liyilungiselela, iphupha elo libhekisa kwizixhobo mpu melelo. Ukuba kwelinye icala kuzingelwa ephupheni, oku kungabonisa ukusilela kurhwebo okanye kwi Ububi bothando. Ukuphupha uziva ungquzulwano olukhulu okanye ukuphela kobudlelwane bothando. Ngokukodwa ukuba inyamakazi lifa ephupheni, kufanekisela iintlungu kwaye ilahleko.
Uphawu lwephupha «ixhama» - ukutolikwa kwengqondo
Uphawu lwephupha lubhekisa kubumnandi kunye ubumnandi. Mhlawumbi uziva usengozini ngakumbi ngoku okanye, kwelinye icala, fumanisa iindawo ezinobuthathaka nezithambileyo zobuntu bakho.
Ixhama ephupheni linokuba luphawu lwe-subconscious ukuze lwazi ngakumbi olo lwayo iimvakalelo ukuhlala uxakekile kwaye uvule intliziyo yakho. Ngokumalunga nokwabelana ngesondo, ixhama linokubhekisa kwicala lobufazi nangokweemvakalelo ngakumbi ephupheni.
Njengesilwanyana esineentloni, sihlala sisebenza ngokuhlwa kwaye sijoja ngononophelo kuwo onke amacala ngaphambi kokuba siphume ehlathini siye kwindawo evulekileyo, iinyamakazi nazo zingazikhathalela. Ndineentloni kuba. Iinyamakazi zityibilika ehlathini okwe-elf. Okanye ugcinwe kancinci kwaye ufuna indawo engakumbi yokubuyela umva. Okanye ungabeka ecaleni uthintelo lwakho, qiniseka ngaphandle kokugubungela, kwaye usondele ebantwini.
Uphawu lwephupha «ixhama» - ukutolika kokomoya
Njengesilwanyana samandla, inyamakazi ibhekisa eluxolweni nombulelo. Ukuba udibana nawe ephupheni, kufuzisela oko ukuthembela Kwilizwe lomoya, ngaphandle kokuba sesichengeni, akakho kwinceba yokungakwazi ukuzinceda.
Qhubeka ubonise icala lakho lobubele ku uxolo lwangaphakathi fumana.